aajnepal – Page 8 – aajnepal
November 11, 2018 aajnepal 0
कञ्चनपुर – बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउनुपर्ने माग गर्दै पीडित परिवार आइतबारदेखि अनिश्चितकालीन धर्ना बस्न सुरु गरेका छन् । हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग राखेर निर्मलाका बुवाआमा, घरपरिवारका सदस्यसहित अधिकारकर्मीहरुले आजदेखि […]
बनियानी । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले युवालाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको छ । युवा स्वरोजगार कोष जिल्ला संयोजन समिति झापाले आज बिर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘भेटघाट छलफल तथा व्याज अनुदान वितरण कार्यक्रम’ […]
काठमाडौं । व्यवसायका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन पाइने भएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गदैँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितोमा राखी ऋण लिएर व्यवसाय गर्न योग्य नागरिकलाई ऋण लिन आग्रह गरेको […]
November 10, 2018 aajnepal 0
जेन्सी । हिस्टेरिया विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । यो मानव स्वास्थ्यमा एक जटिलता बनेर आएको छ । हिस्टेरिया महिलालाई धेरै हुन्छ । अव्यक्त मानसिक तनाव शारीरिक लक्षणको रूपमा प्रकट हुने समस्या नै हिस्टेरिया हो ।हिस्टेरिया अवचेतन […]
म २४ वर्षकी भएँ । मेरो बूढाको लिंगको बाहिर छालामा एलर्जी आएको छ र चिलाउँछ पनि । मलाई डर लागिरहेको छ, पछि गएर यो एलर्जी मलाई सर्छ कि सर्दैन ? यसको रोकथामको उपाय बताइदिन सक्नुहुन्छ […]
यसकारण मानिसको लागी अमृत समान हुन्छ प्याज जानी राखौ काम लाग्छ !
स्वास्थनै मनिसको घन हो तेसैले जरी हामि धनको सुरक्षा गर्दछौ तेसै गरी स्वास्थको पनि गर्नु आबश्यक छ । दैनिक जिवनमा प्रयोग हुने काँचो प्याज खानमा मात्र मिठो नभइकन स्वास्थ्यमा पनि धेरै फाइदा हुने तथ्य सार्बजनिक […]
November 9, 2018 aajnepal 0
पछिल्लो समय महिलाहरु आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा जागरुक बन्ने क्रम बढेपनि यौन तथा प्रजननको बिषयमा भने त्यति खुलेको पाइँदैन । जसले गर्दा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यका बिषय प्रायः गोप्य नै हुने गर्छन् । स्त्री रोग विशेषज्ञ […]
यौन सम्पर्कका बेला हुने हृदयघात पुरुषमा बढी
अमेरिकाको सिडर सायनायल हार्ट इन्टिच्युटले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार यौनसम्पर्कका बेला हुने आकस्मिक हृदयघात महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी हुन्छ । इन्टिच्युटका डाक्टर तथा अनुशन्धानकर्ता सुमित चुघले यस अघि पनि हृदयघात हुने कारण सम्बन्धी ४५ […]
बुटवलमा १३ जुवाडे पक्राउ, ५ लाख नगद बरामद
बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले ट्राफिकचोक र कालिकानगरबाट १३ जना जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले बुटवलको ट्राफिकचोक होटल झिमाबाट ८ जना जुवाडे र नगद ३ लाख ९४ हजार रुपयाँ नियन्त्रणमा लिएको छ । […]
तनहुँ– तनहुँ कारागारका कैदीबन्दीले भाइटीका लगाएका छन् । कैदीबन्दीले आफ्ना दिदीबहिनीको हातबाट भाइटीका लगाएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । कारागारमा रहेका २५ जनाले कारागारभित्रै भाइटीका लगाएको कारागार प्रमुख नारायण अधिकारीले जानकारी दिए । “बेलुका ५ […]